Akita Onye hu nwetara ozi ikpe azu | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Paolo Tescione - Machị 23, 2021
La Akita onye obia, Nwanna Nwaanyị Sasagawa, onye dị afọ iri asatọ na asatọ, kwurịtara banyere ya na otu nwanna nwanyị, nye ya ikike ịgbasa ozi ahụ, nke n’onwe ya dị mkpụmkpụ.
"na 3.30 na Akita, otu mmụọ ozi ahụ pụtara n’ihu m (Sista Sasagawa) dịka ihe dịka afọ 30 gara aga. Mmụọ ozi ahụ gwara m ihe nzuzo.
Ihe oma gbasara igbasa onye obula bu: “Kpuchie onwe gi na ntu”, “biko na-ekpekwa ekpere ndi Penitential Rosary kwa ubochi. Gị, Sista Sasagawa, dị ka nwata na kwa ụbọchị biko chụọ aja ”. Nwanne nwanyị M jụrụ Nwanne nwanyị Sasagawa: "Enwere m ike ịgwa onye ọ bụla?". Sista Sasagawa o nyere nkwenye ya wee gbakwunye: "Kpee ekpere ka m nwee ike ịdị ka nwatakịrị ma chụọ àjà". Nke a bụ ihe Nwanne nwanyị M. ”nụrụ.
Onye ọhụhụ nke Akita: Ozi nke Nwanyị Nwanyị Nwanyị Nwanyị Agnes
Mentre Sista Agnes gbue ikpere n'ala ekpere ikpere ekpere maka ekpere rosary, Our Lady kwuru, sị:
Ọrụ ekwensu ga-abanyekwa na Church n'ụzọ ọ ga-abụ a hụ ndị Kadịnal na-emegide Kadịnal, ndị bishọp megide ndị bishọp. Ndi nchu aja na enye m otuto bu ihe a ga-eleda anya site na nzuko uka ha na ebe ebe icha ha; Chọọchị ga-ejupụta na ndị na-anabata nkwekọrịta na ekwensu ga-akpali ọtụtụ ndị ụkọchukwu na mkpụrụ obi ndị e doro nsọ ịhapụ ọrụ nke Onyenwe anyị.
Il mmụọ ọjọọ ọ ga - abụ ihe na - enweghị atụ megide mkpụrụ obi ndị edoro onwe ha nye Chineke echiche nke ọnwụ nke ọtụtụ mkpụrụ obi bụ ihe kpatara mgbu m. Ọ bụrụ na mmehie abawanye ụba ma nweekwa ike ndọda, a gaghị enwe mgbaghara ọzọ.
The Akita Seer: Olileanya na-anọgide jupụtara na ifuru
Ma olile anya bara ụba n'ihi na Haffert kọwara etu Chukwu siri zite nne ya ọzọ, otu Nne nke ebere, ihe omuma nke olile anya na ihe nile efughi. Ihe na-emecha mee ugbu a dabere n’otú anyị si meghachi omume. O nwere ike ịrịọchitere ma ọ bụ mee ka ntaramahụhụ dị egwu dị ka ọ kọwara na Akita. Naanị m ka nwere ike ịzọpụta gị na ọdachi ndị na-abịanụ. A ga-azọpụta ndị tụkwasịrị m obi.
Ọ gwara anyị na Fatima na n'ikpeazụ ọ na-enweta mmeri. Ya Obi N'Eburo njo ga-enwe mmeri. O biakutere Fatima na Akita nihi na o choro ka anyi sonyere ya na mmeri.
Idtụle ihe Madonna ọ gwara anyị ka anyị mee akụkụ nke anyị, Haffert kwuru n'ụzọ ziri ezi na ozi ya "ọ kachasị ndị Katọlik. Site na ha, karia ihe nile, aghagh inwe azịza. Ọ bụrụ na ha ajụ, ọ̀ bụ na ha ekwesịghị ntaramahụhụ yana 'onye ọjọọ ahụ?' "
Ihe oyiyi nke Madonna kwara ákwá ugboro 101
Mana ọ bụrụ na anyị ege ntị ma soro nke ya ntuziaka, nke a erubeghị. Ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ nwere ike belata.
Na-ede banyere oge ikpeazụ a, St. Louis de Montfort ọ kọwara: “Meri ga-enwu karịa mgbe ọ bụla n’ebere, ike na amara; n'ime ebere, iji weghachite ma jiri ịhụnanya nabata ndị ogbenye na ndị nzuzu bụ ndị ga-atọghata wee laghachi Chọọchị Katọlik; n’ike, ibuso ndị-iro nke Chineke ọgụ ndị ga-ebili na-eyi egwu na-arafu ma na-azọpịa nkwa na iyi-egwu ndị nile na-emegide ha; n'ikpeazu, o ghaghi inwu n'amara iji kpalie ma kwado ndi agha di ike na ndi odi oru nke Jisos Kraist ndi na-aluso agha n'ihi ya. ”
Ihe nne anyi di aso kwuru Fatima metụtakwara Akita: ọ bụrụ na ị mee ihe m gwara gị, a ga-azọpụta ọtụtụ mkpụrụ obi, udo ga-adịkwa.
Dọ aka na ntị: onye ọhụụ Akita alọghachila ịdọ ụwa aka na ntị